Zaylici: Ma madaxweyne ku-xigeenka JSL baa mise waa caaqil reer? – Guban Media
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Zaylici. (photo/file).
Zaylici: Ma madaxweyne ku-xigeenka JSL baa mise waa caaqil reer?
August 14, 2019 August 14, 2019 Ali Mohamed 479 Views 0 Comments
Lewis Center, Ohio—Somaliland waxay jirsatay 28 sano; ilaa iyo haddana ma jiraan nidaam ama hab keexaya xuduudada gobolada, degmooyinka iyo magaalooyinka wadanka. Taasna waxay dhalisay gobolada galbeedka inuu weli Ka jiro is qab-qabsi iyo foodo baahsan.Foodadaas waxay u suurtogelisay in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Zaylici, abaabulo dhulballaadhsi qabiil ku salaysan deegaano ka tirsan gobolada Gabiley-Guban iyo Salal.
Somaliland waxay leedahay xeeb gaaraysa 875 km, oo nagu filan, waa haddii wanaag la doonayo. Gobollada badankood waa iany marin u helaan Gacanka Cadmeed, si ay dadkoodi uga faaidaystaan kheeraadka Bada.Ma dhacayso in koox yar ama beelo yar ay xuurto ku haysataan xeebaha. Waa hanti dadka oo Somaliland oo idil wada leeyihiin.
Laakiin, xeebahaas siiba Lug-Haya iyo Saylac waxay noqdeen goobo “contra-band” iyo hub laga soo galiyo, iyo waxyaabo sharci darro ah ay ka socdaan,lagana dhoofiya duur joogta ku socoto gacanka carbeed, ayna ka soo galaan argagixiso iyo cadawga Somaliland. Maamuladii Riyaale, Silanyo iyo Biixiba indhaha ayey Ka qarsadeen in wax laga qabto foodada ka taagan xeebaha galbeedka Somaliland, si codka reer Boorama loo helo wakhtiga doorashada.
Dhulballaadhsiga uu wado Zaylic; Biixi ayaa ka sheegay shirkii Kulmiye ee Borama. Laakiin, Biixi wuu ku jees jeesay “mock” Yabaal, oo ahaa oday reer Salal oo Ka cabanayey dhulballaadhsiga beelaysan uu maareenayo Zaylici. Yabaal reerkiisa gacan bay siiyeen Somaliland markii wadanka la xoreenayey.
Zaylici markuu u Boorama uga ololaynayay qabsoomiddii shirka Kulmiye ee Boorama wuxuu sheegay markuu la hadlayay tolkii in heshiiska dhisadda dekedda Berbera ee Imaaraadka ay ka mid tahay dekedda Lughaya, aan idiin ballan qaadayo,” inay 10 sano gudahood noqoto deked caalamiya oo Awdal iyo Itoobiya u adeegta”. Qorshahan reeraysan ee Awdal lagu wado inay noqoto dawlad-goboleed ka maaranta dhaqaale ahaan Somaliland waxa ka mid ah waddada la bilaabay ee Boorama iyo Djibouti.
Laakiin waxaan kaloo aan leeyahy Zaylici iyo Zaajin , Borama marka hore waa inay noqotaa goob kulmisa dadka walaalaha, xididka, ee jaarka ah — ee ku nool: Gabiley-Guban, Salal iyo Awdal. Dadkaas oo ay isku direen kala dileen siyaasiin fashilmay, aqoonyahano ku sheeg, iyo odayaal uu hoogaaminayo Zaylici. Wanaaga iyo kal gacaylka aad u hasyo Xamar iyo Djibouti u hay deriskaaga—dadka Gabiley-Guban iyo Salal. Nabad waarto iyo horumar dhab sidaas baa lagu gaaraaa.
← Jaaliyada Somaliland ee Ohio oo u samaysay qado sharafeed Xildhibaan Muse Daud Cilmi
Somalilandta Qarsoon !! →